Wasiirka xafiiska arimaha deegaanada dariska ah iyo xalinta isku dhacyada DDSI oo ka warbixiyay waxqabadkii xafiisya iyo qorshayaal lagu sii dar dargalinayo waxqabadka u yaala. - Cakaara News
Wasiirka xafiiska arimaha deegaanada dariska ah iyo xalinta isku dhacyada DDSI oo ka warbixiyay waxqabadkii xafiisya iyo qorshayaal lagu sii dar dargalinayo waxqabadka u yaala.
Jigjiga(CN) Arbaco Feb-26-2015.Wasiirka xafiiska arimaha deegaanada dariska iyo xalinka isku dhacyada DDSI mudane maxmaed yerow cusmaan oo xafiiskiisa ugu waramayay qaarka mid ah warbaahinta deegaanka ayaa waxa uu sheegay in xafiisku sanadihii ugu danbeeyay tir tirida isku dhacyada deegaanada dariska wakhtiyadii hore ka dhici jiray ee salka ku hayay bulshada xoolo dhaqatada ah iyo kuwa xoolo dhaqato beeralayda ah Sidoo kalena uu xafiisku dadaal ugu jiro sii xoojinta ka midho dhalinta qorshaha SPMka ee deegaanka u yaalay.
waxaa kale oo uu intaasi ku daray in sanadihii ugu danbeeyay lagu guulaystay hawlaha xadaynta ee lagu calaamadinayay xuduudaha maamulada u dhexeeya deegaankeena iyo deegaanada aan walaalaha nahay. Wasiirka oo hadalkiisa sii wada ayaa waxa sheegay in dhamaan shacabka ku dhaqan goobaha xuduudaha ay muujiyeen dadaalo ay ku dheehan tahay is qadirin, wadanoolaansho ka dib markii sanadihii ugu danbeeyo kor loo qaaday garaadkooda wacyigalineed ee ku qotoma isqadarinta isjacayl kuwada noolaanshaha.
Mar uu wasiirku la hadlayay bulshada deegaanka ee ku dhaqan xuduudaha ayaa waxa uu tilmaamay in looga baahan yahay in ay sii xoojiyaan dadaalada ay muujiyeen wakhtiyadii ugu danbaysay ee ku aadanaa wada noolaanshaha iyo is qadarinta ee ay itoobiyada cusubi ku caano maashay